Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in Axmed Madoobe la heshiiye kaliya mucaaradka ka soo jeedo beeshiisa | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in Axmed Madoobe la heshiiye...
Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in Axmed Madoobe la heshiiye kaliya mucaaradka ka soo jeedo beeshiisa
Danjiraha Midowga Afrika ee Soomaaliya Amb. Francisco Madeira oo kamid ahaa madaxdii khudbadda ka jeedisay kulankii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee Jubbaland iyo heshiis ay gaareen hogaanka Jubbaland iyo xubno kamid ah garabyada mucaaradka Jubbaland.
Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Amb. Francisco Madeira
Danjiraha waxaa uu sheegay in hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu kaliya heshiis la gaaray mucaaradka kasoo jeeda beeshiisa, hayeeshee loo baahan yahay in dhamaan beelaha dega deegaannada Jubbaland uu xal la gaaro.
Danjiraha Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira waxaa uu sheegay in uu xaqiijinayo in weli la boohan yahay in lasii ambaqaado dib u heshiisiin dhab ah oo dhamaan deegaannada Jubbaland ka hirgasha lana qanciyo dhamaan xubnaha mucaaradka ah.
23-kii Bishii April ee sanadkaan ayaa waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya heshiis ku kala saxiixday hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo qaar ka mid ah xubnihii isbedel-doonka Jubbaland ee diidanaa dib u doorashada Axmed Madoobe.